Manaparitaka masinina fonosana kiraro tsy misy tenona, kalitao tsara, vidiny ambany, tombony avo lenta, afaka manolo tanteraka ny fonony kiraro amin'ny tanana, mamonjy asa, mampihena ny vidiny, azo namboarina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Na iza na iza mila tolotra manokana sy horonan-tsary momba ny masinina fanaovana kiraro plastika, azafady inbox
Hangzhou Intelligent Creative Technology Co., Ltd. （ICT） dia orinasa malaza amin'ny indostrian'ny automatisation an'i Shina. Ny vokatra indrindra toy ny: Robot indostrialy, milina famonosana ho azy, tsipika famokarana maska ​​automatique, sns.
Nifikitra tamina fotokevitra telo foana ny TIC: ny vahaolana indostrialy manan-tsaina manolotra an'izao tontolo izao, ny fisainana mamorona dia tafiditra ao anaty famolavolana vokatra, ny teknolojia dia manamora ny famokarana indostrialy.
Manodidina ny 20 ireo injeniera teknika fototra ao amin'ny orinasa TIK, izay avy amina orinasa mpamokatra otrik'aretina fanta-daza fanta-daza sy andrim-pikarohana siantifika. Nandritra izay 15 taona lasa niasan'ny TIK izay, ny ekipa teknika dia nitombo mba hanomezana fanampiana ara-teknika sy serivisy vokatra ho an'ireo orinasa maherin'ny 5.000. Amin'ny ho avy, ireo orinasa TIK dia hanohy hanitatra ny ekipa teknikan'izy ireo sy ny fahafaha-mamokatra hanomezana tolotra namboarina amin'ireo orinasam-pamokarana bebe kokoa.
1.15 taona niainany asa fanompoana amin'ny alàlan'ny automatisation indostrialy manan-tsaina;
2. Mpanjifa mihoatra ny 5000 manerantany;
3. Sarona maherin'ny 500 ny fitaovana fisorohana ny valanaretina no naondrana, miaraka amin'ny fandidiana azo antoka ary ny serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra;
4. Ekipa mpivarotra entana efa za-draharaha afaka manampy ny mpanjifa hividy entana sinoa avo lenta;
5. Orinasa mandeha ho azy misy olona maherin'ny 1.000, vidiny mora ary famatsiana azo antoka.